Upgrading a jailbroken iPhone ma ọ bụ iPad bụ a ọrụ na-achọ ntakịrị ihe nke pụrụ iche ọgwụgwọ. Nke mbụ niile, anyị kwesịrị banyere na a jailbroken ngwaọrụ ghara nweta nkwalite-ejighi eriri. Dabara nke ọma n'ihi unu, isiokwu a ga-akọwa otú ị nwere ike n'enweghị imelite gị jailbroken ngwaọrụ.
Part 1: Ndabere ngwaọrụ gị
Nkebi nke 2: Kwenye Ike Tụkwasịnụ na Network
Nkebi nke 3: The ụzọ kasị mma iji kwalite a jailbroken iPhone ma ọ bụ iPad ka iOS 9
Nkebi nke 4: Bara Uru Atụmatụ upgrading jailbroken iPhone / iPad ka iOS 9
Ndabere gị ngwaọrụ
Ma akpa mkpa ka ị ndabere anyị ngwaọrụ. Ị na-eme otú iji hụ na gị niile faịlụ dị mma kwesịrị ihe ọjọọ n'oge update. Ọ dịkwa nnọọ mkpa ka ndabere gị faịlụ n'ihi mmegolite usoro a mara itinye gị na ngwaọrụ na mgbake mode.
Ịnwere ike kwado ndabere na ngwaọrụ gị iji iTunes. Ọ bụrụ na ị na-ekpebi iji iTunes, ihe niile i nwere na ngwaọrụ gị ga-kwadoo gụnyere gị ala ozi dị ka okwuntughe. N'ihi nke a, ọ bụrụ na ị chọrọ nwere oyiri nke ihe niile, iTunes bụ eleghị anya ụzọ na-aga.
Ọ bụrụ na ị Otú ọ dị chọrọ a ngalaba nke gị data kwadoo, i nwere ike mkpa iji ọzọ ngwa ime ọrụ. Otu nke kasị mma bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS. Nke a ngwa ga-ekwe ka ị n'ezie ịhọrọ data ị chọrọ ndabere.
Kwenye Ike Tụkwasịnụ na Network
Iji ọma imelite ngwaọrụ gị, ị ga-mkpa ike jikọọ a anụ Wi-Fi na netwọk. Nke a dị mkpa n'ihi na ị na-aga na-na nbudata na software n'oge update na gị mkpa a pụrụ ịdabere na njikọ iji hụ na download na dechara na oge.
Ị na-aga dị mkpa ngwaọrụ gị ike na-na ala, 60% zuru tupu ị nwaa ndị download. N'ezie Apple na-atụ aro na ngwaọrụ gị plugged n'ime a ike isi iyi tupu ị malite na melite usoro.
Ugbu a na anyị dị njikere, ka kwalite ka iOS 9.
Ụzọ kasị mma iji kwalite a jailbroken iPhone ma ọ bụ iPad ka iOS 9
Ọ bụrụ na ị nwere ngwaọrụ na-jailbroken na-ị na-agbalị imelite ka iOS 9, ị ga-na-achọ na a na ihuenyo na anya dị ka onye n'okpuru enweghị a otutu ọganihu.
Nke a bụ n'ụzọ bụ isi n'ihi na ọtụtụ jailbroken ngwaọrụ na-eji oge a jailbreak dị ka evasi0n na Pingu nwere nkwarụ OTA (n'elu ikuku) mmelite. Ha na-eme otú iji hụ na ngwaọrụ adịghị na-akpaghị aka wụnye update.
Ị nwere ike mere naanị imelite na ngwaọrụ gị iOS 9 iji iTunes. A bụ otú.
Nzọụkwụ 1: Anya isi na ị ebudatara na arụnyere ọhụrụ version nke iTunes na kọmputa gị, Jikọọ na ngwaọrụ gị ka gị na kọmputa na iji eriri cables.
Nzọụkwụ 2: Pịa na ngwaọrụ bọtịnụ na n'elu nri akuku wee pịa on "ego maka mmelite" dịnụ update ga-akpaghị aka ibudata na update na ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 3: Ị ga-enweta a popup ozi na-agwa gị nke dị update. Dị nnọọ pịa "download na update"
iTunes ga-agwa gị na ndị ọhụrụ iOS version ga-abụ dị na ngwaọrụ gị anya. Ọ dị mkpa na ị na-ekwentị jikọọ kọmputa gị ezie dum usoro. Usoro nwekwara ike na-oge ụfọdụ ebe ọ bụ na faịlụ nwere ike ịbụ dị ka nnukwu dị 2.1GB ma ọ bụrụ na ị na-enwe ezi njikọ o kwesịrị ịbụ a nsogbu.
Ị nwere ike mkpa Malitegharịa ekwentị gị na ngwaọrụ mezue update.
Bara uru Atụmatụ upgrading jailbroken iPhone / iPad ka iOS 9
Dị ka anyị kwuru na mbụ, a jailbroken ekwentị bụ ntakịrị pụrụ iche otú ọ chọrọ ka a mesoo na mmezi elekọta mgbe upgrading. Ebe a bụ ihe ole na ole ị chọrọ ịnọgide na n'uche mgbe upgrading a jailbroken ekwentị.
Gị mkpa iji hụ na gị na data-kụziri elu ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-emelite ka iOS 9. The mkpa nke a ndabere pụghị ileghara ya anya.
Ị ga-mkpa iji hụ na ekwentị gị nwere ezu ike na na ị nwere ohere a ike Wi-Fi na netwọk.
Ọ dị mkpa iburu n'obi na a jailbroken ekwentị nwere ike ghara emelitere-ejighi eriri mere nanị ụzọ ime ya bụ iji iTunes. Agbalị ime ya ọ bụla ọzọ ụzọ ga na-eme na obi nkoropụ.
Ọ dịkwa mkpa iburu n'obi na upgrading ka iOS 9 ga-eme ọnwụ nke gị niile jailbreak mgbanwe.
Ọ bụrụ na ị ka chọrọ nwere jailbroken ngwaọrụ, ị ga-mkpa reinstall niile nke gị jailbreak Tweaks mgbe update.
> Resource> iPhone> The Best Ngwọta n'ihi jailbroken iPhone / iPad Iji nweta nkwalite ka iOS 9